Ciyaaro – Geelle Magazine
Kooxaha Premier League-ga oo isku khilaafsan sida lagu dhameystiri karo kulumada harsan ee Horyaalka
Iyada oo la joojiyey tartanka Horyaalka Premier League-ga cudurka safmarka ah ee Coronavirus awgiis, ayaa haddana waxaa soo baxaya in xilligan dhow aysan suurtogal ahayn in garoomada lagu soo noqdo. Madaxa Xiriirka Kubadda Cagta ee Ingiriiska, Greg Clarke, ayaa yiri: […]
Kooxda Manchester United ayaa la hadli doonta difaacooda Marcos Rojo, kaddib markii la shaaciyay inuu ku xadgudbay shuruucda xayiraadaha Coronavirus ee dalkiisa Argentina. Sawirro muujinaya Rojo oo sigaar cabaya, saaxiibbadiisna kula ciyaaraya bannaaka ayaa lagu shaaciyay baraha bulshada, waxayna qabsadeen […]
Ciyaaryahan Caan ah oo Soomaaliya ugu deeqay deeq raashin ah
Ciyaaryahanka asal ahan kasoo jeeda dalka Turkiga ee Ozil ayaa kafaale qaaday afurinta 16,000 oo qof bisha Ramadaan, kuwaas oo ka kooban 2,000 qoys oo Suuriyaan iyo Turkish ah. Dhanka kale Mascuud Ozil ayaa 90,000 oo raashin Af-fur ah ugu […]
Kooxaha Premier League-ga ayaa shir ay shalay ku yeesheen internet-ka oo maqal iyo muuqaal ahaa waxay kaga wada hadleen qaabka loo soo gabagabeyn lahaa xilli ciyaareedka 2019/2020 ee haatan socday. Waxyaabaha laga wada hadley ayaa waxaa ka mid ah in […]
Ciyaaryahan ka ciyaara horyaalka Soomaaliya oo laga helay Covid 19
Sida uu xaqiijiyey telefishin ka mid ah telefishinada baahiya horyaalka Soomaaliya ee loo yaqaano Somali Premier League, ayaa shaaciyey in ciyaaryahan ka tirsan ciyortoyda ka xamaalata horyaalka uu ku dhacay cudurka safmareenka ah ee Covid 19. Kubad sameeyaha Kooxda Kubadda […]
Halyeey hore ee Liverpool ah oo diiday in Reds loo caleema-saaro Horyaalka Premier League
Halyeey kooxda Liverpool ah ayaa diiday in Reds loo caleemo saaro ku guuleysiga Horyaalka Premier League-ga xilli ciyaareedkan, haddii aan la dhameystirin horyaalka. Liverpool ayaa kaliya 6 dhibcood u jirtay in loo caleemo saaro horyaalka Premier League-ga, muddo 30 ah […]
Xiddiga Ronaldinho iyo walaalkiis oo xabsiga laga sii daayey
Laacibkii hore ee xulka qaranka Brazil, Ronaldinho, ayaa waxaa laga sii daayey xabsi ku yaallay dalka Paraguay. Laacibkan oo sannadkii 2005-tii ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or wuxuu waqti ku qaatay xabsi, waxaana lala xiray walaalkiis. Labadoodaba waxaa la xiray 6-dii […]
Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino ayaa cadeeyay waqtiga saxda ah ee dib loogu soo laaban doono ciyaarista kubadda cagta. Gianni Infantino ayaa sheegay in xaaladda adag ee jirta ay sababtay dhimashada dad badan, wuxuuna sharxay in […]
Tababare Caan ah oo hooyadiis ay u geeriyootay Cudurka Coronavirus
War ay hadda shaacisey kooxda reer England ee Manchester City ayaa lagu xaqiijiyey geerida ku timid hooyada dhashay tababaraha naadigaas ee Pep Guardiola. Kooxda ka dhisan England waxa ay xaqiijisay in Guardiola hooyadiis Dolors Sala Carrió ay u geeriyootay caabuqa […]
Halyeyga reer Spain iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona Xavi Hernandez ayaa kala doortay kan fiican saaxiibadiis hore ee naadiga Blaugrana ee Lionel Messi iyo Ronaldinho. Xavi Hernandez ayaa aaminsan in Lionel Messi uu ka fiican yahay halyeyga reer Brazil […]